တယ်လီဖုန်းဈေးတွေချပေးမဲ့အကြောင်း ဆက်သွယ်ရေးမှတရားဝင်ထုတ်ပြန် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » တယ်လီဖုန်းဈေးတွေချပေးမဲ့အကြောင်း ဆက်သွယ်ရေးမှတရားဝင်ထုတ်ပြန်
Posted by ႏြယ္ပင္ on Mar 5, 2012 in Myanma News, News | 17 comments
မှတ်ချက် ။ သစ်ထူးလွင်မှ ဖော်ပြသည် ။
ပြည်သူတွေရဲ့ ချွေးနည်းစာကို ၊ ပါးပါးလှီးလို့ကိုမဝနိုင်ကြဘူး
ဒီမောင်တို့ကတော့ (၅၀၀၀) ပဲစောင့်တော့မယ်
မမနွယ်ပင်ရေ သေချာတာကတော့ အများပြည်သူရဲ ့ငွေတွေကို
ဟုတ်ကဲ့ပါ သမ္မတကြီး မိုဘိုင်းဖုန်းဈေးတွေလဲ ချပေးသလို ဖုန်းခေါ်ဆိုခတွေလဲ ချပေးစေလိုပါတယ် နောက်ပြီး ည ၆နာရီနဲ့ ၈နာရီကြား ဂျီအက်စ်အမ်တွေနဲ့ ဖုန်းပြောရင် ဖုန်းကမကျသေးပဲ အသံမကြားရတော့ပဲ အမြဲဖြစ်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ် နောက်ပြီး အဲဒီ GSM တွေနဲ့ အဲဒီအချိန်တွေခေါ်ရင် တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်မှုလိုင်းများ မအားသေးပါရှင် ဆိုပြီး အမြဲဖြစ်တယ် တန်ဖိုးနည်းဖုန်းတွေသာ ထပ်ချလိုက်လို့ကတော့ ဘယ်လိုတွေများ စခန်းသွားရမလဲ မသိတော့ဘူး အဲဒီကိစ္စလေးတွေလဲ ကြပ်မတ်ပေးပါဦးဗျာ
နောက်ဆုံးအကြိမ်ဘဲ ဖြစ်ပါစေ လို ့သာ ။
သေချာပြီ ဆိုရင်တော့ ပြေးဝယ်ပြီး မြတ်ရင်ပြန်ရောင်းလိုက်မယ်။ကြာကြာကိုင်ထားလို့ မဖြစ်ဖူးဗျ။ နောက် တစ်ခေါက်ဈေးပြန်ကျရင် ထပ်ရှုံးနေဦးမယ်။ သတိထားကြပါဗျို့။
ပြီးခဲ့တဲ့ လ ၂၉ ရက်နေ ့ကမှ ၊ လူက ကျန်းမာရေး သိပ်မလန်းလို ့၊ အင်တာနက်ကဖေး မသွားနိုင်လို ့ဆိုပြီး ၊ အင်တာနက်သုံးလို ့ရတဲ့ စီဒီအမ်အေ တစ်လုံး ဝယ်သုံးနေမိပါတယ် ။ အခုတော့ နေရင်းထိုင်ရင်း ၃သိန်းကျော် ပလုံရပြီ ဗျို ့။ သောက်ကျိုးတော့ နဲ ရပါဘီ လကွယ်ဟယ်ဟယ်…
အရင် ၁၅ သိန်တန်ကလေးတစ်လုံးမဲပေါက်တုန်းက ဘာကြေးညာကြေးနဲ့ ၁၆ သိန်းလောက်ကုန်သွားတယ်
နောက်ငါးသိန်းတန်ထွက်လာတော့….၁၁ သိန်းရှုုံးတယ်..ဟောအခု..၂ သိန်းတန်ဖြစ်သွားတော့..၁၄သိန်းရှုုံးတယ်…အခုမှဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့..ဖုန်း ရှစ်လုံးကြီးများတောင်ရမှာ..
တရစ်ချင်းတရစ်ချင်း …. ပါးပါးလှီးနေသလားမှတ်တယ် …. ။
ဆယ်လူလာပေါ်တုန်းက … ဝယ်ရတာ… သုံးဆယ် ၊လေးဆယ် ….
ဆယ့်ငါးသိန်းသွင်းဈေးတုန်းက ဝယ်ရတာ .. အစိတ် ၊ သုံးဆယ် …
ငါးသိန်းတုန်းက … ခုနှစ်သိန်းကနေ … ငါးသိန်း သုံးသောင်းထိပေါက်ပြန်တယ် … ။
ပေါ်လိုက်တဲ့ ဖုန်းတွေ .. သောက်သောက်လဲ …. လိုင်းကျတော့ …. စုတ်ပြတ်လို့ ….. ဘေးချင်းကပ်ထိုင်နေလျှက် ဆက်သွယ်မှု ဧရိယာပြင်ပဆိုတာလည်း ကြုံဖူးတယ် …. ။
အရေတွက်များများရှိတာထက် ၊ အရည်ချင်း ကောင်းအောင် အရင်ပံ့ပိုးပေးသင့်တာပါ … ။
အခုလည်း အစိုးရဈေး 15သိန်းဝယ်ထားရတဲ့ ဖုန်းတွေက ….ပြန်အပ်တော့မယ်… ပိုက်ဆံပြန်ယူမယ် …ဘာညာကြားနေပြန်တယ် … ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်မလဲ ..သိတော့ သိချင်သား … ။
အမိန့်တို့ ကြော်ငြာစာတို့မှာ အပေါ်မှာ ရုံးတံဆိပ်ပါရသလို
အောက်ကလည်း ထုတ်ပြန်တဲ့ဌာနအမည်လည်း ပါရတယ်နော်
အဟင့် သူတို.ပြောတော့ တစ်သိန်းရှစ်သောင်းဆို… လူဇိုးတွေ…
ပိုက်ဆံနှစ်သိန်းရှိတာ တစ်သိန်းရှစ်သောင်းနဲ. ဆိုလို. နှစ်သောင်းကို ကေတီဗွီမှာ ဒါနပြုလိုက်ပြီး အဟီးဟီး..
အခုတော့ နှစ်သောင်း ထပ်လိုပြီး ပြီးတော့ ဟန်းဆက်ဖိုးလေးပါ…ထပ်ပေါင်းတော့… အင်းးးးးးးးးးးးးးး
မနွယ်ပင် တားတားကို တနားဘူးလားဟင်…. တနားရင် နှစ်သောင်းစိုက်ပေးနော်…….. ဟီးဟီး
ထူးမှာလုပ်နေတဲ့ ညီမလေးတစ်ယောက်ကတော့ သူတို့ဆီမှာ အခုထိ 180000 ပဲပြောတယ်တဲ့
လိုချင်ရင်တောင် နာမယ်ပေးထား ဖုန်းနံပါတ်လှတာလေးရွေးပေးမယ်ပြောနေတယ်
အခုချိန်ထိတော့ အတိအကျက ဘယ်ဟာမှန်းကို မသိတော့ပါဘူး ..
ဒါနဲ့ ရွှေတိုက်စိုးတစ်ယောက် နှစ်သောင်းကို ကေတီဗွီမှာ ဒါနပြုလိုက်တာ အုပ်ထိန်းသူမသိသေးဘူး
ထင်တယ် နွယ်ပင်အကြောင်းကြားပေးမယ်လေ ပြီးမှ ပြောထားတဲ့ အကူအညီပေးမယ် ရမလား
မမအိတုန်ရေးတာကို အပြည့်အဝထောက်ခံပါတယ် 15 သိန်းဖုန်းတွေပိုက်ဆံပြန်ပေးမယ်ဆိုတာလည်း သိချင်ပါတယ်…. လုပ်ကြပါ လုပ်ကြပါ ရှင်တို့ခေတ်ပဲလေ……. တူဖြစ်တုန်းတော့ထုကြပေ့ါဟယ်…ပေဖြစ် တုန်းခံဦးဟဲ့…တိန်….တိန်…..
အော် 15သိန်းတန် ကို 35 သိန်းနဲ့ဝယ်မိတဲ့သူခင်မျာ သူငယ်ချင်းက ရင်ထုမနာဖြစ်တယ်တဲ့နော်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ရင်ကွဲပက်လက်နဲ့ကိုပြောတာ။ အခုနေမှဝယ်ရင် ငါ 10 လုံးလောက်ဝယ်ဖြစ်မှာတဲ့။ ကဲ 5000 တန် ထွက်လာရင် အလုံး 30 လောက်ဝယ်ဦးမယ်လို့များ ပြောဦးမလားသူငယ်ချင်းရယ်……..။ ဘယ်နှယ့်ရှိစ ဘယ်နှယ့်ရှိစ။
တရွှေ့ရွှေ့ နဲ့ ရွှေ့လာတာ
ဒီနေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာမှာ ပါပါတယ်…။
ဒီည သတင်းကိုကော နားထောင်ကြည့်ပီးဘီလား…ဒန်…ဒန်……
ဒင်းတို့ လုပ်စားလာတာ ကြာပီကော……
ဝယ်ပြီးမြတ်ရင် ပြန်ရောင်းမယ် စိတ်မကူးနဲ့၊လျှောက်တဲ့သူတိုင်းပေးမှာ ဘယ်လိုမြတ်မလဲ၊
နောက် ၅၀၀ဝဖုန်းလာမှ အလုံး ၄ဝ ဝယ်လို့ရတယ် ထပ်နောင်တ ရနေဦးမယ်၊
အရှေ့တောင်အာရှပွဲက လာတော့မှာ၊အရှေ့တောင်အာရှ sim card ဈေးနှူန်းမှာ ၂သိန်း(ဒေါ်လာ ၂၄ဝခန့်)ဆိုတာ ရှိမှမရှိပဲ။